Fanangonana, fihomehezana maimaimpoana ho an'ny ankizy, fahazazana ary ankizy
Miaraka aminay ianao dia hahita ny teny faran'izay mahafinaritra indrindra momba ny ankizy, teny sy fahendrena momba ny fihomehezan'ireo ankizy, nalahatra araka ny abidia ary aseho mazava tsara ho anao.
Teny nalaina momba ny ankizy, ny fahazazana ary ny hehy an'ny ankizy
Ny teny nindramina hitanay momba ny ankizy dia mety ihany koa ho toy ny lahatsoratra miarahaba amin'ny karatra amin'ny fahaterahan'ny zaza na ho an'ny mailaka fiarahabana na hafatra Whatsapp.
Zaza mitanisa ankizy - © detailblick-foto / Adobe Stock
Mikaroha amin'ny alàlan'ny topy maso anay momba ny teny mahafinaritra indrindra momba ny ankizy, teny momba ny reny sy ny ray. Vakio ny fahendrena momba ny fahazazana, akaninjaza ary fitaizana avy amin'ny karazana mpanoratra avy amin'ny vanim-potoana samihafa.
Toa tsy misy malemy loatra amin'ny ankizy toy ny fandrahonana tsy tanterahina alohan'ny hariva. Jean Paul
Aza ferana amin'ny zavatra nianaranao ny zanakao satria teraka tamin'ny fotoana hafa izy ireo. Avy amin'ny teny hebreo
Izany no antony itiavako ny ankizy, satria mbola mahita an'izao tontolo izao sy ny tenany ao anatin'ny fitaratra majika tsara tarehy an'ny eritreriny izy ireo. Rivo-doza Theodor
Ny fon'ny reny dia ny efitranon-janany. Henry Ward Beecher
Ny fon'ny zaza dia toy ny fon'Andriamanitra. Ohabolana sinoa
Ny firavaka any an-danitra dia ny masoandro, ny firavaka ao an-trano dia ny zaza. ohabolana sinoa
Mino sy tia ny zaza talohan'ny nieritreretany sy ny asany. Johann Heinrich Pestalozzi
Ny zaza dia mbola mariky ny firaisana tsy tapaka amin'ny fitiavana sy ny adidy. George Eliot
Ny ain'ny ray aman-dreny no boky vakin'ny ankizy. Augustine Aurelius
Malalaka toy ny mahazatra foana ny zanakao. Avelao izy handre, hitady ary hianjera, mitsangana ary diso. Johann Heinrich Pestalozzi
Ny olon-dehibe dia mijery ny hetsika, ny zaza tiana. Ohabolana indiana
Ny tena mampientanentana ny fahazazana dia mifototra amin'ny zava-misy fa ny zava-drehetra, hatramin'ny biby fiompy, dia sariaka sy tsara fanahy amin'ny ankizy, satria avy amin'izany dia mipoitra ny fahatsapana filaminana izay afaka amin'ny dingana voalohany mankany amin'ny tontolo feno fankahalana ary tsy miverina intsony. Friedrich Hebbel
Ny lehilahy dia zaza iray monja amin'ny fiainany, ary tsy maintsy mijanona izy mandra-pahatongany mandova ny fahazazany amin'ny hafa. Friedrich Schiller
Ny toe-tsain'ny zaza feno hafaliana sy mahavokatra dia tsy mila hetsika ivelany hahitana hetsika sy fialamboly. Edgar Allan Poe
Tsy mandositra ny asa ianao rehefa asehonao ny zanakao ny avana. Nefa tsy miandry anao hamita ny asanao ny avana. Ohabolana sinoa
Ny fomba tsara hitaizana zaza dia ny mahita reny tsara ho azy. Christian Morgenstern
Ny fiheverana ny fahazazana dia miorim-paka lalina indrindra. Karl Emil French
Ny tapany voalohany amin'ny fiananay dia simban'ny ray aman-dreny, ny faharoa an'ny zanaka. Clarence Darrow
Manana ny tsiambaratelo sy ny fahagagana ny fahazazana - fa iza no afaka milaza amin'izy ireo ary iza no afaka mandika izany? Isika rehetra dia nirenireny namakivaky ity ala mahagaga mangina ity - nanokatra ny masontsika tamin'ny fanatoranana feno hafaliana isika rehetra, ary ny zava-misy marina teo amin'ny fiainana dia nameno ny fanahintsika. Tao am-pony dia namirapiratra toy ny lanitra lohataona izy io, madio toy ny fofon'ny volomparasy - milamina sy masina toy ny marainan'ny alahady. Friedrich Max Muller
Ny ankizy dia mahita ny zavatra rehetra amin'ny tsy misy, ny olon-dehibe tsy mahita na inona na inona amin'ny iray manontolo. Giacomo Leopardi
Malemy sy masina tokoa ny fanahin'ilay zaza ka tsy tokony hatokisana afa-tsy amin'ireo mpanakanto mpampianatra. Ida Boy-Ed
Ny ankamaroan'ny olona izay antitra aloha dia. Misy zaza zokiolona, ​​toy ny fanahin'ny ankizy ihany amin'ny olona antitra. Carl Ludwig Schleich
Ny natiora dia maniry ny hahatonga ny ankizy alohan'ny hahatongavan'ny olon-dehibe. Raha te-hamadika ity baiko ity isika dia hamokatra voankazo precocious izay tsy misy ranom-boankazo na tanjaka: tanora antitra sy tanora antitra. Jean Jacques Rousseau
Ny psikolojia dia tsy mitsahatra mianatra, indrindra amin'ny fanahin'ny zaza. Ludwig Adolf Wiese
Masina ny fanahin'ilay zaza ary izay entina eo alohany dia tsy maintsy manana ny lanjan'ny fahadiovana farafaharatsiny. Johann Gottfried von Herder
Ny mason-dralehilahy ihany no amirapiratan'ny masoandro, fa ny mason'ilay zaza kosa no mamirapiratra ao aminy. Ralph Waldo Emerson
Zavatra telo no sisa tavela tamin'ny paradisa: ny kintana amin'ny alina, ny voninkazo antoandro ary ny mason'ny ankizy. Dante Alighieri
Azonao omena ny zanakao ny fitiavanao fa tsy ny eritreritrao. Manana ny azy manokana izy ireo. Khalil Gibran
Ny manam-pahaizana amin'ny laboratoarany dia tsy teknisiana fotsiny; izy koa dia mijoro eo alohan'ny lalàn'ny natiora toy ny zaza alohan'ny tontolon'ny angano. Marie Curie
Ny zaza dia boky tokony hamakiantsika sy soratantsika. Peter Rosegger
Ny zaza dia fitiavana izay nanjary hita maso. Novalis
Ny zaza dia tsy sambo mila fenoina, fa afo mila may. Francois Rabelais
Ny olona tsy zakan'ny ankizy sy ny biby dia tsy azo atokisana. Carl Hilty
Miaritra lehilahy malahelo aho fa tsy zaza malahelo. Jean Paul
Ny ray aman-dreny no sarotra indrindra mamela ny zanany amin'ny hadisoana vitany. Marie von Ebner-Eschenbach
Ny sazin'ny fahotan'ny fahatanorantsika manokana no tsy tokony hanafaka antsika amin'ireo zanatsika. Friedrich Hebbel
Ho an'ny ray maty ny zanany dia maty ny ho avy. Ho an'ny zaza maty ny ray aman-dreniny dia maty ny lasa. Berthold Auerbach
Tsy nanana ny eritreritra keliko aho fa mety hisy be dia be amin'ny zaza dimy volana. Charles Darwin
Ao amin'ny tontolo kely misy ny ankizy dia tsy misy zavatra izay ekena mazava tsara sy tsapan'izy ireo ho tsy rariny. Charles Dickens
Ao amin'ireo ankizy dia miaina ny fiainanao manokana ianao ary izao vao azonao tsara. Søren Aabye Kierkegaard
Moa ve ny fahazazana tsy ilay voa miafina izay ahazoan'ny hazon'aina fiainana be alahelo sy fifaliana azy mivarina tsikelikely? Johann Peter Hebel
Tsy misy zaza tsara loatra ka tsy faly ilay reny rehefa matory ihany amin'ny farany. Ralph Waldo Emerson
Tsy tokony hisy olona manatona ankizy manana endrika hafa ankoatry ny endrika sariaka, satria ny zaza dia mahatakatra ny fiteny voajanahary alohan'ny hahatakarany ny tenindrazany. Johann Michael Sailer
Ny zaza - zavamananaina izay - zara raha nianatra niteny - dia voarara avy hatrany ny hanidy ny vavany. Tsy fantatra ny mpanoratra
Ankizy - olom-bitsy tsy mahazo mitondra tena toa ny ray aman-dreniny mitovy taona aminy. Tsy fantatra ny mpanoratra
Tsy miaina maranitra sy mangidy tahaka ny tsy rariny ny ankizy. Charles Dickens
Ny zaza dia manana ny fahagagana mahagaga amin'ny fanovana ny tenany ho amin'izay tiany. Tsy fantatra ny mpanoratra
Mora dia tia ny ankizy, lalina tokoa; tsy maintsy ho ratsy tokoa izay halany! Jean Paul
Ny ankizy dia tsy maintsy malemy paika amin'ny olon-dehibe. Antoine de Saint-Exupery
Tetezana mankany an-danitra ny ankizy. Ohabolana persiana
Ny ankizy no fialam-boly tiako indrindra. Adelbert von Chamisso
Teny nalaina momba ny ankizy sy ny fahazazana - © Alliance / Adobe Stock
Tia tena foana ny ankizy ary izany no izy, ary tsy mety izany, fa ny zanak'izy ireo avy eo manome azy ireo voa tsara ho triatra. Theodor Fontane
Ny ankizy sy ny famataran'ora dia tsy tokony haratra tsy tapaka, tsy maintsy mandeha ihany koa izy ireo. Jean Paul
Ny ankizy mihomehy be dia miady amin'ny lafin'ny anjely. Rabanus Maurus
Ny tabataba avy amin'ny ankizy dia nofinofin'ny ho avy. Tsy fantatra ny mpanoratra
Afaka mianatra zavatra betsaka amin'ny ankizy ny olona iray. Ohatra, ohatrinona ny faharetana anananao. Franklin P. Jones
Ny fahazazana dia fihainoana tsy tapaka, tsy manan-tsiny amin'ny varavarana voarara. Ny olona mandre izay tsy tokony ho re. Oscar Wilde
Mila malemy fanahy sy sariaka amin'ny ankizy ianao. Ny fiainam-pianakaviana no fatorana tsara indrindra. Ny ankizy no mpitsara tsara indrindra antsika. Otto von Bismarck
Miaraka amin'ny fahazazana feno fitiavana, dia mahazaka tontolo mangatsiaka mandritra ny antsasaky ny androm-piainany. Jean Paul
Ny miaraka amin'ny ankizy dia balsama ho an'ny fanahy. Fyodor Dostoevsky
Ny fahazazana dia tsy hanazava ny fananana entana ara-nofo, fa ny fitiavana sy ny toe-tsain'ny ray aman-dreny. Rudolf von Tavel
Tsy tokony hanao tsinontsinona na hihomehy na oviana na oviana ny olona amin'ny lalao natrehin'ireo ankizy, fa raiso am-pitandremana foana izy ireo. Tadidio fa mpamorona izy ireo! Amin'ny lalao ataon'izy ireo dia maneho ny tenany ho fanahy malalaka sy mieritreritra izy ireo. Heinrich Lhotzky
Tsy mbola nisy toy izany ny ankizy marobe toy ny amin'ny fotoan-tsarotra, mankahery ny tenany maimaim-poana amin'ny alina ny filan'ny andro. Denis Diderot
Reny irery no mahalala izay tiana holazaina ary ny ho faly. Adelbert von Chamisso
Raha tsy misy zanaka dia ho lao izao tontolo izao. Jeremias Gotthelf
Esory ny ranomaso be an'ny ankizy! Manimba ny voninkazo ny orana lava. Jean Paul
Rehefa mbola kely ny ankizy dia mila manampy azy ireo hamaka isika. Rehefa lehibe anefa izy ireo dia tsy maintsy manome elatra ho azy ireo isika. Ohabolana indiana
Ny biby sy ny ankizy kely dia fitaratry ny natiora. Epicurus an'ny Samos
Ary ny fitiavana dia toa mafy orina tao amin'ny fanahin'ny zaza, ny fahatsiarovana ny fitiavana teo aloha talohan'ny nahaterahana. Juan Eugenio Hartzenbusch
Ry zanakay, izao no andronao, Enga anie ka hahita fahafenoana ny lalanao ary hahatratra ny haavon'ny masoandro. Vavaka indianina
Betsaka ny ankizy, be ahiahy. Tsy manan-janaka, tsy misy fifaliana. Marcus Tullius Cicero
Izay tianao tamin'ny fahazazanao dia mijanona ao am-ponao mandra-pahanteranao. Khalil Gibran
Izay navelan'ny vehivavy ho antsika tsy nahita fianarana aza dia mampivelatra ny zaza ao amintsika rehefa mifanatrika aminy isika. Johann Wolfgang von Goethe
Rehefa mahita zaza ianao dia tratranao maty vava Andriamanitra. Martin Luther
Raha te hahatratra ny tena fandriampahalemana eto amin'izao tontolo izao isika dia tsy maintsy manomboka amin'ireo ankizy. Mahatma Gandhi
Ireo izay tsy manan-janaka dia tsy manana jiro eo imasony. Ohabolana persiana
Izay tsy manan-janaka sy mitaiza azy dia tsy mahalala afa-tsy ny antsasaky ny fiainana. Theodor Hieck
Izay mampanantena zavatra amin'ny ankizy, na lalao, fanomezana na tsorakazo dia tano ho toy ny fianianana. Peter Rosegger
Izay tia ny zanany dia tsy mila mitaiza azy. Ohabolana indiana
Tahaka ny tsy misy ivy mamehy ny andrin'ny ranomandry, dia toy izany koa ny fanahin'ny zaza tsy mifikitra amin'ny fo mangatsiaka, tsy misy fitiavana. Lorenz mpandroso sakafo
Ny zaza dia tokony hahazo zavatra roa avy amin'ny ray aman-dreniny: faka sy elatra. Johann Wolfgang von Goethe
Manana fanontaniana, sosokevitra na fanakianana ve ianao? Faly izahay manampy fanampiny, teny sy fahendrena tsara momba ny ankizy ao amin'ny angoninay. Aza misalasala mifandray aminay.
Tononkalo momba ny ankizy sy ny fitiavana
Tononkalo momba ny ankizy - lolo
Tononkalo momba ny ankizy - avana
Teny nalaina avy amin'i Heinrich Heine
Teny nindramin'i Friedrick Rückert
Fitanisana eran-tany sy filan'ny nofo
Miresaka firaisana ara-nofo sy firaisana ara-nofo